IXiaomi Mi 9T kunye neMi 9T Pro zifika ngoJuni 12 eYurophu | I-Androidsis
IXiaomi Mi 9T sele inomhla wokukhutshwa
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kutyhilwe ukuba iXiaomi Mi 9T zaziza kuphehlelelwa kungekudala eYurophu. Kwiintsuku ezimbalwa kamva i iifoto zokuqala kunye neenkcukacha malunga neefowuni ezintsha kraca. La ngamagama akunike inkampani kwiRedmi K20 kunye neK20 Pro yokumiliselwa kwayo ngokusemthethweni eYurophu. Okokugqibela, sele sinedatha engaphezulu.
Kuba sele siyazi Ziza kuphehlelelwa nini i-Xiaomi Mi 9T kunye neMi 9T Pro eYurophu Uhlobo lwesiTshayina. Iimodeli ezimbini ezibizelwe ukuba zibe yimpumelelo entsha kwinkampani, ngakumbi kuba ziya kufika ngexabiso elikhulu lemali, eliya kubenza banqweneleke kakhulu kuluhlu lwayo.
Inkampani ifuna ukusebenzisa uthungelwano lwayo ekuhlaleni ukwabelana nokwaziswa kwezi modeli. Iya kuba ngoJuni 12 xa singazithenga ezi Xiaomi Mi 9T kunye neMi 9T Pro ngokusemthethweni eYurophu. Ke akufuneki ukuba siyilinde ixesha elide, ngeveki inokwenzeka.
Kusele iintsuku ezili-10 kuphela! Entsha #Mi9 Ilungu liza kuphehlelela nge-12 kaJuni! Ngaba ukulungele ukuvelisa izinto ezintsha kuye wonke umntu #Mi9T? #PopUpInStyle pic.twitter.com/TY8FTVBKaY
- Xiaomi # 5GIsHere (@Xiaomi) Juni 3, 2019
Nangona sele sinawo umhla esinokulindela ukuba ezi fowuni zimbini zivela kwitshayina, akukho lwazi malunga namaxabiso abo. Ngale ndlela abakasiniki naluphi na ulwazi ukuza kuthi ga ngoku. Kodwa ngokuqinisekileyo ziya kuba ziimodeli ezimbini ezinokufikeleleka ngaphakathi kuluhlu lwazo.
Ke ngoko, kuya kufuneka silinde inkampani ngokwayo ukuba isinike imikhondo ngakumbi malunga nale Xiaomi Mi 9T kunye neMi 9T Pro, eya kuthi ibe yimpumelelo entsha kwintengiso. Njengoko sele uyazi, ii-specs azitshintshanga konke konke ngokubhekisele kwiRedmi K20 kunye neK20 Pro.Ligama kuphela elitshintshiweyo kunye nelogo yeXiaomi.
Kwiveki kufanele ukuba sele bekwimakethi yaseYurophu, mhlawumbi kukho umsitho omncinci wokubazisa kwimarike yaseYurophu. Ngayiphi na imeko, sinethemba lokwazi kungekudala amaxabiso eXiaomi Mi 9T kunye neMI 9T Pro eSpain. Ukwazi nokuba zonke iinguqulelo zefowuni ziza kuphehlelelwa okanye hayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 9T sele inomhla wokukhutshwa
Uyenza njani ingxoxo eyimfihlo kwiTelegram enemiyalezo eyonakalisa ngokwakho
Isigqeba se-Samsung sabanjwa ngokwenza ubuqhetseba nokonakalisa ubungqina